China Paper Cup Kugadzira uye Fekitori | JAHOO
Pepa makapu, Yakakwana yekofi, chokoreti inopisa kana chero chimwe chinwiwa chinopisa kana chinotonhora, Yakakwana kumba kana kushandiswa kwekutengesa. Inokodzera Milk tii shopu, soya bhinzi shopu chitoro, inotonhora zvitoro, yekukurumidza-chikafu maresitorendi, kofi shopu Dessert House Hotera, resitorendi, kumba uye zvakasiyana siyana zvevaraidzo, Yakakwira tembiricha o ...
Pepa makapu, Yakakwana yekofi, chokoreti inopisa kana chero chimwe chinwiwa chinopisa kana chinotonhora, Yakakwana kumba kana kushandiswa kwekutengesa. Inokodzera chitoro cheMukaka tii, shopu yemukaka wesoya, zvitoro zvinotonhora, zvekudya zvekukurumidza, kofi shopu Dessert House Hotera, resitorendi, kumba uye zvakasiyana siyana zvevaraidzo, Kupisa kwakanyanya kwe100 DEG C, hapana kubvaruka, kunhuwidza, hapana kushanduka kuri nyore .
Kune yako hutano uye yakasvibirira nharaunda, zvinokurudzirwa uye zvinokurudzirwa kuti iwe ushandise zvemhando yepamusoro zvinoraswa mapepa makapu uye pepa tafura yakagadzirwa naHunan Youliq inosangana nezvakatarisirwa zvekuchengetedza zvakatipoteredza!
Isu tinotenda kuti zvigadzirwa zvakanakisa zvinovakirwa pane fungidziro yekuti havazove neyakareba-yakaipa mhedzisiro paAmai Zvisikwa. Isu takazvipira kungogadzira zvigadzirwa zvinodzikisidzika zvizere zvine hushamwari uye zvisina kusvibisa kubva pane zvakasvibirira kusvika kune yekugadzira nzira yekushandisa mushure mekushandisa. Pamwe chete nemi munofanoona zviri mberi, tichaedza nepatinogona napo kuti tikure munzvimbo yechisikirwo yevanhu uye neyakaomera nyika.
Pashure: mukombe wemuto
Mukaka tii mukombe
Kudhinda inopisa kutsika bepa kapu
Iyo yemitambo yakakosha bepa mukombe
Custom logo yakapetwa kaviri kapu kapu